မီးတောက်ရစ်သမ် (တာရာမင်းဝေ) – PoemsCorner
မဟာလင်္ကာ တစ်ပိုင်းတစ်စ.. ရှိနေလေရဲ့..။
ခု… ရထားတို့ ဥသြဆွဲလိုက်ကြပြီ..
ငါက.. ဆပ်ပြာဖူဖောင်းကို ခိုစီးပြီး
`သစ္စာ´ကို ပဲ့တင်သံနဲ့ပဲ ပြန်ပေးနိုင်ခဲ့သူ…။
ငါ့ကိုသတ်.. ငါ့ရင်ဘတ်ကို ထိုးခွဲဖောက်လှန်ကြည့်
ငါ့ဆီမှာ… မြေမှုန်တွေ စွန်းထင်းလျက်ပါပဲလေ..။
သရဲခြောက်ရာ ညတစ်ညကို ..ပိုသတိရတတ်တယ်´…။
ငါ.. သတ္တိကောင်းကင်မှာ… နီလွင်ထစ်ချုန်း
ဘယ်သူ့မှ မပြောချင်တဲ့စကားတွေ ပွေ့ပိုက်
ကိုယ့်ကိုယ်ကို.. `လူမိုက်´လို့ ပြန်ခေါ်ခဲ့ရတယ်…။
ရယ်ကာမောကာ ပြန်ပြောနိုင်တဲ့ အကျင့်လေး
ဗီးနပ်စ်ရဲ့ နက္ခတ်တို့ တလက်လက်ပြာဝေမှုန်သင်း
မြင်းကကြိုးတို့ကို ပြင်လို့ `သ´လို့နေခဲ့ပေါ့…။
ဒုတိယအရာကို ငါ.. ငြင်းတယ်…။
အရာရာကို လက်ဖြန့်မိုး စောင့်ရှောက်ချင်တဲ့ လူငယ်
ခု… ခြွင်းချက်နဲ့ လက်နက်ချလိုက်ပါတယ်…။
In: ကဗျာ,တာရာမင်းဝေ Posted By: Number1Princess Date: Apr 26, 2010
သံသာငှက်ကလေးသို့ – တာရာမင်းဝေ
Leave comment 18 Comments & 7,003 views
အစ်မ တစ်ပိုဒ် ကျန်သေးတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ပိုဒ်ပါ။
ငါချစ်မြတ်ရတဲ့ နေရောင်ခြည်တွေနဲ့ မိန်းမပျိုကို
ဘ၀ ဆိုတဲ့ မာယာနိုင်ငံအိုက
၀မ်းမနည်းသလို ငါတို့ နှုတ်ဆက်
By: nyitpuck at May 17, 2010
thanks for your report. just updated.
By: Thet Twe at May 17, 2010
I think no,when I read that poem i did not see lest words.That poem stop (
မင်း….ငါ့ကို မေ့သွားမှာပါ…။) there.But i reed that inanovel.Could somebody tell me pls!what is truth.What do u like?
For me I want to stop မင်း….ငါ့ကို မေ့သွားမှာပါ…။ only here!!!!!!!!
By: demon925 at Aug 31, 2010
အရမ်း… အရမ်းကို.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ… ကျွန်တော်.. ဒီကဗျာကိုလိုက်ရှာနေတာ.. တစ်နှစ်လောက်ရှိပြီ… ပထမတစ်ခါတုန်းက.. ဘယ်စာအုပ်ထဲမှာလဲမသိဘူး.. ဖတ်လိုက်ရတော့.. အရမ်းကြိုက်သွားမိတယ်.. အခုဒီမှာ.. ဒုတိယအခေါက်ဖတ်ရခြင်းပါ.. အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
By: blackjoker at Dec 6, 2010
7တန်းလောက်က ဖတ်ခဲ့တာဆိုတော့လဲ ဘယ်ထဲကမှန်းကိုမသိဖြစ်နေတာ
By: phoenixlay at Dec 6, 2010
thank alot !!!!
By: အသဲကွဲမိုး at Jan 6, 2011
By: သော်သော် at Jul 1, 2011
သိုးဆောင်းဂစ်တာတစ်လက်ရဲ့ မှတ်တမ်းပါ စာအုပ်နာမည်က
By: မိုးသစ်လေပြေ at Jul 1, 2011
ဟုတ်ပါတယ်…သိုးဆောင်းဂစ်တာတစ်လက်ရဲ့မှတ်တမ်းပါ…ဆရာရေ ခင်ဗျာပြောခဲ့သလိုပဲ ကြာတော့လဲကြာခဲ့ပြီလေ ..လူတွေကနေ့စဉ်ဖြတ်ဖောက်စီးဆင်းခံရခြင်းတွေနဲ့အတူသူတို့ အမေ့ခံခဲ့ရတယ် ဒါမေမယ့် ..အဲ့ဒီလမ်းမှာရှာတယ်…သူတို့ ရှာတယ်..နှစ်ပေါင်းမှားစွာ..လပေါင်းများစွာ…နေ့ရက်ပေါင်းများစွာမှာ သူတို့ မှော်ဆရာကိုရှာတယ်လေ
ခငိဗျားရဲ့ လက်တစ်စုံနဲ့သာဆက်ပြီး ခါချတောက်ပပေးပါ
ကျနော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းဆရာ
By: ခရမ်းရောင်ဇင်ယော် at Nov 23, 2011
By: မှုံရွှေရည် at Jan 16, 2012
By: Thiha at Jul 20, 2012
By: ငွေဖူး-စလင်း at Jul 28, 2012
By: loafer at Jul 29, 2012
By: loafer at Oct 1, 2012
Welcome to iHome.
By: မြတ်သူရ at Mar 5, 2013
ဒီ လို က ဗျာ မျိုး ကို ရိုကျိုးဖို့ပဲ တတ်နိုင်ပါတယ်ဆရာ
ပြန် မ ရ နိုင်တော့တာ သေချာသွားပြီ။
By: နိုးဆက် at Mar 6, 2013
ကျေးဇူးရှင် ဆရာ နဲ့ ကျေးဇူးရှင် ကဗျာ…..ထာဝရ လေးစားစွာဖြင့်
By: နိုးဆက် at Apr 20, 2013
ကဗျာလေး ကို ဒီမှာ တစ်ခါ ပြန်ဖတ်မိပြန်ပြီ..၊ သတိရတယ်..၊ တာရာ တစ်စင်း မှေးမှိန်သွားခဲ့ရတယ်
ကျွန်တော် တလေးတစား ဖတ်ဖြစ်တဲ့ ကဗျာတွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ဆိုလည်းမမှားပါဘူး..၊
By: ဇော်သက်ဦး at Sep 10, 2013